Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii OYSU Eritrea oo ugu baaqay xubnaha JWXO inay laba-jibaaraan wax-qabadkooda
Shirkii OYSU Eritrea oo ugu baaqay xubnaha JWXO inay laba-jibaaraan wax-qabadkooda
Waxaa markii ay taariikhdu ahayd 18/04/14 kulan si heer sare ah loo soo agaasimay isugu yimid xubnaha ururka midawga dhalinta iyo ardayda Ogadeniya ee dalka Eritrea.
Kulankan oo ka dhacay Hotelka caanka ah eeRed sea hotel ee Magaalo xeebeeda Musawac, ayaa waxaa ka soo qayb galay xubaha ururka dhalinyarada, Masuuliyiinta jaaliyada iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen Bulshada Soomaaliyeed ee dagan xerada Qaxootiga Emkulu.
Ugu horayn waxaa sidii caadada ahayd lagu furay shirka wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Sheekh Cabdi-maalig Xasan oo ku dheeraaday alle ka cabsiga iyo in la garab istaago Mujaahidiinta Cwxo ee safka hore dagaalka kaga jira.
Kadibna waxaa codbaahiyaha la wareegay hogaanka abaabulka ururka dhalinyarada Mudane Axmed Cabdi yusuf oo isagu shirka daadihinayey, wuxuuna ugu horayn Microfoonka ku soo dhaweeyey, Gudoomiyaha Ururka Dhalinta iyo Ardayda S/ogadeniya ee dalkan Eritrea Halgame Muxyadiin Cabdi Xuseen oo ka hadlay wax-qabadka ururka dhalinyarada iyo barnaamijka la doonayo in uu ururku fuliyo sanadkan 2014.
Kadibna Marwo Hibo Macalin cabdi oo ka mid ah maamulka ururka dhalinyarada OYSU E, ayaa ka hadashay arimaha xuquuqul insaanka Ogadeniya, waxayna farta ku fiiqday dhibaatooyinka baaxada leh ee ka jira jeelka dadka lagu ciqaabo ee Jeel Ogadeen iyo maxaabiista tirada badan ee ku jirta jeelasha kale ee dalka.
Waxaa sidoo kale madasha shirka ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada S/ogadeniya ee Musawac Halgame Maxamed Xasan yuusuf “Maxamed goday” oo ka war bixiyey xaalada dalka Ogadeniya iyo guulaha ay Cwxo ka soo hooyeen dagaaladii ugu danbeeyey ee ay ciidanka cadawgaEthiopiala galeen. Shirkaas oo dad aad u badani ay ka hadleen ayaa go’aano dhaxagal ah laga soo saaray. Shirka wuxuu ku dhawaaqay qodobadan soo socda;
– O.Y.S.U Eritrea: waxay ammaan iyo bogaadin u soo jedinaysaa Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia (CWXO) oo waajibkoodii gobanimodoon ee xoraynta ogaadenya u gutay si geesinimo leh.
– Waxaan bogaadinaynaa Shacabka geesiga ah ee S/gadenia ee u adkaystay xasuuqa iyo dambiyada bila,aadantinimada ka dhanka ah kuna mintiday qadiyaddooda xaqa ah ee xoraynta dalkooda.
– Waxay bogaadin iyo Amaan u soo jeedinayaan dhalinyaradu dhamaanba Jaaliyaadka S/ogadeniya ee kaalinta libaax ka qaadanaya halganka Ciida barakaysan ee Ogadeniya lagu dhaafinayo guumaysiga madaw ee Abasiniya.
– O.Y.S.U Eritrea, waxay sidoo kale bogaadin usoojeedinaynaa Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia ee daafaha caalamka Ka hawlgala qadiyadeenana meelo badan gaadhsiiyey.
Waxaan cambaaraynaynaa xasuuqa, cadaadiska, dulmiga iyo midab takoorka uu guumaysiga Ethiopiaku hayo shacabka Bir,ma gaydada ah ee S/ogadeniya.
1. OYSU Eritrea, waxay ugu baaqaysaa dhamaan xubaha Jwxo iyo hawl-wadeenada JWXO in ay markasta u taagnaadaan fashilinta shirqoolada cadawga ee wajiyada badan leh iyo la dagaalanka waxkasta oo halganka wax u dhimikara iyo inay sii laba jibaaraan hawlaha ay halganka u hayaan.
2. Waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha, in taliska macangaga ah ee wayaanaha lagu qasbo in ay joojiyaan Gumaadka isir-tir tirka ah ee ay ku hayaan shacabka S/ogadeniya…